Ọ Bụ A Kwaa A Kwụrụ n’Agbanyeghị Ọrịa Ọjọọ Bịara Ya​—Onye Na-arịa Ọrịa Na-akpọnwụ Ahụ́
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Bassa (Cameroon) Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish Fon French Galician Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Ibanag Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabuverdianu Kannada Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Mashi Maya Mongolian Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Persian Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Serbian Serbian (Roman) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Uzbek Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Ọ Bụ A Kwaa A Kwụrụ n’Agbanyeghị Ọrịa Ọjọọ Bịara Ya
Virginia, otu nwaanyị bụ́ Onyeàmà Jehova, na-arịa otu ọrịa ọjọọ nke na-eme ka ahụ́ mmadụ kpọnwụọ. Ọrịa a mekwara ka ahụ́ ya niile kpọnwụọ. Ọ na-ahụ ụzọ na-anụkwa ihe, ọ na-emepeli ma na-emechi anya ya, na-emegharịkwa isi ya ntakịrị. Ọ naghị ekwuli okwu ma ọ bụ rie nri. Nwanna nwaanyị a nwere mgbe ahụ́ dị ya mma, ya agbasiekwa ike. Ma otu ụbọchị n’afọ 1997, otu akụkụ n’azụ isi ya bịara na-egbu ya ezigbo mgbu, na-adị ya ka e nwere onye na-akụ ya ihe n’isi. Di ya kpọgara ya ụlọ ọgwụ, ọ bụkwa ná mgbede ụbọchị ahụ ka ọ tụbọrọ n’amaghịzi ebe ọ nọ. O tetara mgbe izu abụọ gachara. Ebe ọ nọ bụ n’ebe a na-elekọta ndị ọrịa ha siri ezigbo ike, ma ahụ́ ya akpọnwụọla, e tinyekwaara ya ihe ga-enyere ya aka iku ume. Ọ nọrọ abalị ole na ole n’amaghị ebe ọ nọ, ọ naghịdị echeta ihe ọ bụla, ma ọ bụdị onye ọ bụ.
Nwanna nwaanyị Virginia kọrọ ihe mechaziri mee. “Eji m nwayọọ nwayọọ bido chetawa ihe. Anọ m na-ekpesi ekpere ike. Achọghị m ịnwụ hapụ nwa m nwoke ka dị obere ka ọ ghọọ nwa na-enweghị nne. Ihe m mere ka o nyere m aka ka obi na-esi m ike bụ ịna-echeta amaokwu Baịbụl dị iche iche m nwere ike icheta.
“Ka e mechara, ndị dọkịta kpọpụtara m n’ebe ahụ a na-elekọta ndị ọrịa ha siri ezigbo ike. Mgbe m nọrọ ọnwa isii n’ụlọ ọgwụ dị iche iche nakwa n’ebe a nọ gbalịa ime ka akụkụ ahụ́ m ndị kpọnwụrụ akpọnwụ dịghachi mma, a gwara m ka m laa. Ahụ́ m niile ka kpọnwụrụ akpọnwụ, ọ bụkwa ndị ọzọ na-emere m ihe niile. Nke ahụ mere ka ike ụwa gwụ m! Ọ bịara dị m ka o nweghị uru m baara ndị ọzọ ma ọ bụdị Jehova. Ihe ọzọkwa nọ na-echu m ụra bụ otú m ga-esi elekọta nwa m nwoke.
“E bidoziri m ịgụ akụkọ ụmụnna ndị rịatụrụla ọrịa ndị yiri nke a m na-arịa. Otú ha si jeere Jehova ozi n’agbanyeghị nsogbu ha tụkwara m n’anya. Nke a mere ka m kwụsị ichegbu onwe m gbasara nsogbu nke m kama lekwasịwazie anya n’ihe ndị m ga-emeli. Tupu m rịawa ọrịa, anaghị m enwecha ohere eme ihe ndị gbasara ofufe Chineke. Ma ugbu a enweziri m ohere ụbọchị niile. N’ihi ya, kama ịnọ na-echegbu onwe m, ebidoro m ime ihe ndị ga-enyere m aka ka mụ na Jehova dịkwuo ná mma.
“Amụtara m otú e si eji kọmputa eme ihe dị iche iche. M na-eji otu ihe dị na kọmputa nke na-ahụ otú m si emegharị isi m ede ihe. Ime ihe a na-agwụ ike, ma ụdị nkà na ụzụ a na-enyere m aka ịna-enwe ọmụmụ Baịbụl nke onwe m nakwa iji akwụkwọ ozi na kọmputa na-ezi ndị ọzọ ozi ọma. Otú mụ na ndị nọ m nso si akparịta ụka bụ iji bọọdụ e dere mkpụrụ akwụkwọ na ya. Onye ahụ mụ na ya nọ ga-atụ aka ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ahụ otu otu. Ọ bụrụ na onye ahụ atụọ aka na nke m na-achọghị, mụ emepesịa anya m ike; ma ọ bụrụ na ọ tụọ aka na nke m chọrọ mụ emechie anya m. Anyị na-emegide ihe a ruo mgbe m sụpere okwu ma ọ bụ ahịrịokwu m chọrọ ikwu. Ụfọdụ ụmụnna nwaanyị ndị mụ na ha na-anọkarị aghọọla aka ochie n’ịghọta ihe m chọrọ ikwu. Ma, e nwee mgbe ha na-ekwuteghị ya, anyị ejiri ya mere ihe ọchị.
Ebe m si na bọọdụ e dere mkpụrụ akwụkwọ na-agwa otu nwanna nwaanyị ihe m chọrọ
“Isonye n’ihe ndị a na-eme n’ọgbakọ na-atọgbu m atọgbu. Ana m ahụ na m sonyere n’ọmụmụ ihe niile, ugbu a m na-eji Zoom ma ọ bụ ihe yiri ya na-esonye n’ọmụmụ ihe. Ana m ede ihe m chọrọ ịza, onye ọzọ enyere m aka gụpụta ya. E nwekwara ụmụnna ndị mụ na ha na-eso ekiri Ihe Omume Tiivi anyị * a na-eme kwa ọnwa.
“Arịala m ọrịa a afọ iri abụọ na atọ ugbu a. Mgbe ụfọdụ, obi na-ajọ m njọ. Ma ekpere na-enyere m aka n’oge ndị ahụ. Ihe ndị ọzọ na-enyere m aka bụ mkpakọrịta mụ na ụmụnna, nakwa ịna-eme ike m niile n’ozi Jehova. Ndị ọgbakọ anyị enyerela m aka mụ enwee ike ịrụ ọrụ ọsụ ụzọ inyeaka ruo afọ isii ugbu a. Agbalịkwara m ka nwa m nwoke bụ́ Alessandro mụta ọtụtụ ihe dị mma n’aka m. Ọ lụọla nwaanyị ugbu a, ọ bụkwa okenye ọgbakọ. Ya na nwunye ya bụkwa ndị ọsụ ụzọ oge niile.
“Ọtụtụ mgbe, m na-eche gbasara ihe ndị m ga-enwe ike ime mgbe ụwa ga-aghọ paradaịs. Ihe mbụ m ga-achọ ime bụ iji ọnụ m gwa ndị ọzọ gbasara Jehova. M ga-achọ ịga ije n’ebe e nwere osimiri na ọhịa nwere osisi dị iche iche ka m nwee ike kirie ihe ndị mara mma ndị Jehova kere. Ebe ọ bụkwa na ihe m na-eri kemgbe ihe karịrị iri afọ abụọ ugbu a bụ ihe dị mmiri mmiri, ana m atụ anya mgbe m ga-enwe ike ịghọrọ apụl taa n’onwe m. Ebe m bụ onye Ịtali, ana m atụkwa anya mgbe m ga na-esi ma na-eri nri obodo anyị ndị na-akasị amasị m, ma nke a na-akpọ pizza!
“Ọ bụ ‘olileanya nzọpụta’ na-enyere m aka ka m ghara ịna-echegbu onwe m. (1 Ndị Tesalonaịka 5:8) Ịnọ na-ahụ onwe m n’ime ụwa ọhụrụ na-enye m obi ụtọ n’agbanyeghị ọrịa m. Amakwa m na n’oge na-adịghị anya nsogbu niile ga-akwụsị. N’eziokwu, ọ na-agụsi m agụụ ike ịhụ mgbe m ga-enwe ike ijidesi ‘ndụ nke bụ́ ezigbo ndụ’ aka ike. Nke bụ́ ndụ Jehova kwere nkwa inye anyị n’Alaeze ya.”​—1 Timoti 6:19; Matiu 6:​9, 10.
^ par. 6 E nwere ike inweta Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova na jw.org.
Idi Nsogbu Akụkọ Gbasara Ndịàmà Jehova
Baịbụl Ò Nwere Ike Inyere M Aka Ma Ọ Bụrụ na M Na-arịa Ọrịa Na-anaghị Ala Ala?
Ee. Lee ihe atọ nwere ike inyere gị aka idi ọrịa na-anaghị ala ala ị na-arịa.
Otú Ị Ga-esi Na-enwe Obi Ụtọ​—⁠Inwe Ezigbo Ahụ́ Ike na Idi Nsogbu Ndị Bịaara Anyị
Ọrịa ọ̀ ga-eme ka mmadụ gharazie ịna-enwe obi ụtọ?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ọ Bụ A Kwaa A Kwụrụ n’Agbanyeghị Ọrịa Ọjọọ Bịara Ya
ijwex isiokwu 19
Jehova Emeerela M Ihe Ọma Na-erughịrị M